ရတနာပုံကျောင်းသား နှင့် ကွန်ပျူတာကျောင်းသူ
Multiply.com မှာ Account ဖွင့်ထားတာတော့ကြာပါပြီ။ သိပ်ပြီး မ၀င်ဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့ဝင်ကြည့်တော့မှ invite တစ်ခုကိုတွေ့တယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ Myanmar Muzic Group တဲ့။ Accept လုပ်ပြီး ကြည့်လိုက်တာ .. အားပါး .. နည်းတဲ့ Album တွေမဟုတ်ဘူး။ Page ပေါင်း 35 ခု (သီချင်းပေါင်း 3000) လောက်ရှိတယ်။ မြန်မာသီချင်းတွေ သီးသန့်ပါပဲ။ တစ်ချို့ Music Site တွေမှာ မရှိတဲ့ သီချင်းတွေလည်း အဲဒီ site မှာ ရှိပါတယ်။
site ရဲ့ လိပ်စာက http://mmuzicgroup.multiply.com/ ပါ။
ကျွန်တော်လည်း အားရင် သီချင်းတွေပဲနားထောင်တတ်တော့ သီချင်းတွေကို Page တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်ရှာတယ်။ အဲဒီမှာ Mandalay Hip Hop Album ဆိုတဲ့ Album ကိုသွားတွေ့တယ်။ ဘယ်သူတွေ ဆိုထားသလဲဆိုတာရယ် သီချင်းနာမည်တွေရယ် မပါဘူး။ Album တွေထဲက တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ်နားထောင်လိုက်တာ Track No.13 ကို တော်တော်လေးကြိုက်သွားတယ်။ အထူးသဖြင့် မန္တလေး ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေ ပိုကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှာ ချစ်သူ ရည်းစားရှိနေသူ ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ကြိုက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ သီချင်းလေးကို နားဆင်ကြည့်လိုက်ပါ
Labels: Download song/video
Thet Oo 9:42 pm
သီချင်းလေး နားထောင်ကြည့် ဖြစ်တယ်။ မဆိုးဘူးဗျ။ ဂီတာတီးထားတာလေး မိုက်တယ်။ လင့်ခ်ပေးထားတဲ့ Group ကိုတော့ မင်ဘာမဟုတ်လို့ ၀င်လို့မရပါ။ ဒါထက် ကိုချမ်း ဂျီမေးလ်လိပ်စာလေး သိထားချင်တယ်။ မေးချင်တာလေး၊ သိချင်တာလေး တွေ မေးလ်နဲ့ မေးချင်လို့ပါ။
Thet Oo 9:43 pm
Sorry! Email လိပ်စာပေးလိုက်တာ မဆိုင်တဲ့ www သုံးလုံး ပါသွားတယ်ဗျို့။
Myo Kyaw Htun 3:34 am
Thanks Ko Chan, so many albums!!!
Khunmyahlaing 3:34 pm
သီချင်းလေးနားထောင်သွားပါတယ်.. လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ
Yan 3:52 am
အားပါးပါး.. သီချင်းလေးက ဂွတ်တယ်ဗျာ. Download Link လေး ထုတ်ပေးပါဦးဗျ
သီချင်းလေးတွေကိုယ်တိုင် download လုပ်ချင်တယ်ဗျာ..
ဘုန်းဘုန်းဦးဥတ္တရ ရွှေရတု မွေးနေ့မင်္ဂလာ
Free Wav Recorder
၃၈ ဖြာ မင်္ဂလာ (သို့) မင်္ဂလာတရားသည် ကြီးပွားခြင်း၏ အေ...
Happy Birthday Ju Ju
Mandalay and Bloggers
Anyway - မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ
Dictionary Extensions for Firefox
၆၀ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့
Operal - Speed Dial
How to access Gmail When it is blocked
OctroTalk (or) A Window Mobile Version of GTalk
1st July and 7th July
တ၀က်ပြည့်နေသလား ... လျော့နေသလား